YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, January 12
NYN 12.1. 2011pdf
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/12/20110အကြံပြုခြင်း
10 attachments — Download all attachments (zipped for
Jan 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2331K View Download
Jan 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2759K View Download
December 2010 chronology.pdf
Aung San Suu Kyi and U.S. Policy toward Burma-1.pdf
11001 Sr. Logistics Assistant GS-6 Magway.pdf
Jan 2011 Yeyintnge's Diary
၇ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ၁၁
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 12 ဇန်နဝါရီ 2011
မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြည်သူ့များ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေဆိုပြီး မြန်မာပြည်ပြန်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်ပအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရချိန် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ကြရမယ့်အချိန်မှာ ပြည်သူတရပ်လုံးက ဝင်ပြီး ကာကွယ်ကြရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို အချိန်မျိုးမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ပြဌာန်းလိုက်တာ မဆီလျော်သလို၊ ပြဌာန်းပုံ၊ ပြဌာန်းနည်းကလည်း အတင်းအကြပ်ပြဌာန်းလိုက်သလို ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဦးတင်ဦး ဟာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး စတဲ့ ရာထူးတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်အပေါ် ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ ဦးကျော်ဇံသာ က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ပြန်တမ်းထဲမှာပါလာတဲ့ စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာ ပြည်သူလူထုတော်တော်များများကို အတော်စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ ကလည်း တပ်ထဲဝင်ရမလား၊ သူတို့ စစ်မှုထမ်းရမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လိုအပ်လာရင် စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အရင်တုန်းကတည်းက ကြားဘူးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းမှာတောင် ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ ဒီဥပဒေဟာ ဘာကြောင့် လူတွေအပူတပြင်း စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်ရတဲ့ဥပဒေလို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ဒီလိုပါ ဒီဥစ္စာမျိုးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှိတုန်းကတည်းက ဒီနိုင်ငံ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာ ရှိတယ်။ တဖက်ကဆိုလည်း အရှေ့ မြောက်ဆိုရင် နိုင်ငံကြီး၊ အနောက်မြောက်ဆိုလည်း နိုင်ငံကြီး စသဖြင့် ရှိတော့ကာ ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာနေတဲ့ နိုင်ငံငယ်တနိုင်ငံအနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့အခါ လွတ်လပ်ရေးကို မဆုံးရှုံးရလေအောင် တိုင်းသူပြည်သား၊ တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် နိုင်ငံရဲ့  အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတိုင်းရဲ့  တာဝန်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒီလိုလည်း လုပ်ရမှာပေါ့။ သို့သော်လည်း ဒီနိုင်ငံမှာက လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ဖွားဖက်တော်က ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု စပြီးပေါ်လာတာ ဖြစ်တော့။ ဒါကို ချက်ချင်း အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ မဆလခေတ်ကျတော့ ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြတော့ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့  လုံခြုံရေးတာဝန်ဝတ္ထရာများကို နိုင်ငံသားတိုင်းက တာဝန်ထမ်းဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ထင်ထင်ရှားရှား ရေးလိုက်တယ်။ သို့သော်လည်း အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဟာက တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့  ညီညွှတ်မှုအားက မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့လိုက်ပြန်ရင်လည်း ဖွဲ့လိုက်တဲ့ထဲမှာ အုတ်ရောရောကျောက်ရောရော ပါလာပြီး ပြဿနာတွေ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလား၊ ဘာလားဆိုတာတွေ ဖြစ်ခဲ့တော့ ထိထိရောက်ရောက် အကောင်ထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ အခုအခါမှာ ဘယ်လိုရန်သူတွေ ရှိနေလို့ သူတို့တွက်ပြီးတော့ ဒီလို စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်လာတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အခုအခါမှာလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်ရန်သူမှ အန္တရာယ်မှလည်း မရှိဘူး။ “There is no imminent danger at all now.” နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်း ကျနော်တို့က ဘယ်သူကိုမှလည်း ကျူးကျော်မှာ မဟုတ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဗြုန်းကနေ ထုတ်ဖော်လိုက်တယ်။ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ အချိန်အခါကလည်း အမှန်ကတော့ သူတို့ (၃၁) ရက်နေ့ဆိုရင် ပါလီမန် လွှတ်တော်ခေါ်မယ်ဆိုတယ်။ ဒါမျိုး တက်သုတ်ရိုက်ပြီး လုပ်တဲ့ကိစ္စက ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကတော့ အများကြီး စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အင်အား လေးသိန်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ စာရင်းထဲမှာ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မှာ မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်သူတွေက တွက်ပြတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အင်အားဖြည့်ချင်လို့ ဒီလို တိုးချဲ့ တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ တပ်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ အင်အားကြီးတွေ အများကြီးဖွဲ့ထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဥပမာဆိုရင် တပ်ရင်းတရင်းမှာ လူ (၇၇၇) ယောက်ရှိတယ်။ ကျနော် ရှိတုန်းကတော့ ဒါ စီရင်ရမယ့် တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ဖော်မယ့် တပ်ရင်းပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့။ အဲဒီမှာလည်း တပ်ရင်းတွေက အင်အားမပြည့်ဘူး။ မပြည့်ဘူးဆိုတာ (၇၀၀) ကျော် ရှိရမယ့်နေရာမှာ (၃၀၀) တို့ (၄၀၀) တို့ရှိတယ်။ စစ်ထွက်တဲ့အခါလည်း တကယ် အကုန်မထွက်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုဟာတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ ဒီ အင်အားတွေ လိုနေတယ်၊ ပြုနေတယ်ဆိုတာတွေက မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူး။ ဖြည့်ဆည်းဖို့လုပ်ပြန်တော့လည်း သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ အခုန ပြောသလို ခလေးစစ်သားတွေလုပ်တယ်၊ ခေါ်တယ်ပြုတယ်။ တချို့ ကို အဓမ္မ စစ်ထဲသွင်းတယ်။ နောက် မယောင်မလည်နဲ့ စစ်ထဲရောက်သွားတယ်။ ပြန်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုတော့။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေနဲ့ အင်အားမပြည့်တော့က ဒါကို အခုလို လွှတ်တော်တို့ ဘာတို့တင်ပြုပြီးလုပ်ရင် ဆွေးနွေးမှာတွေ၊ ဆွေးနွေးရမယ့်ဟာတွေ၊ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ နော်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး အများစု အင်အားက သူတို့ ကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တို့မှာက အဓိကရှိတယ်။ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာတော့ အရိုးခံတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာက နည်းနည်းလေးပဲ။ ဘယ်လိုနည်းမှ လွမ်းမိုးနိုင်မှာ မရှိတော့။ အဲဒီတော့ သူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအခါ လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အခုအချိန်အခါမှာတော့ ဒို့ဒါကို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းလုပ်တာမျိုးပဲ။ အမှန်ကတော့ ဒီလို အမျိုးသားစစ်မှုထမ်းဆိုတာက နိုင်ငံတကာက ကိုယ့်ကိုလာရောက်ပြီး အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ဟာဖြစ်ပြီဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်လာရင် လွှတ်တော်ကနေ ဒီဟာက အန္တရာယ်တွေ့ပြီးလို့ ပြောရင် ဟုတ်တယ်။ အခုဟာက ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိသေးခင်စပ်ကြားမှာ ဖုတ်ပူမီးတိုက် လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက သွေးရိုးသားရိုး လုပ်တဲ့သဘော မဟုတ်သေးဘူးလို့ သဘောပေါက်မိတယ်။ အခု ထုတ်တဲ့ဟာကတော့ national service ဆိုတာထက် national conscription act လို့ ဖြစ်နေတယ်။ လာကြလုပ်ကြ အတင်းအဓမ္မလုပ် သဘောမျိုး သက်ရောက်သွားရင်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော် တခုမေးချင်တာက အဲဒီတော့ စောစောက ပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်း အုတ်ရောရောကျောက်ရောရောဆိုတော့ အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ပြဌာန်းတဲ့ အစိုးရက ပြည်သူလူထုကို ယုံသလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ သူတို့ ခေါင်းထဲမှာရှိတာတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သို့သော် သူတို့လုပ်ပုံလုပ်နည်း လုပ်မယ့်ဟာက ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ပြဌာန်းလိုက်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကြိုက်လူတွေကို ခေါ်မယ်။ စိတ်ကြိုက်မတွေ့တဲ့လူတွေကိုတော့ ခေါ်တော့ခေါ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုဟာတွေကို စိတ်ကြိုက်ထားမယ်။ ဘယ်လိုဟာတွေကို ဘယ်လိုပုံနေရာမှာထားမယ်။ ဒီလိုဟာတွေလည်း သူတို့ စဉ်းစားချင်စဉ်းစားမလား မပြောတတ်ဘူး။ အမှန်ကတော့ national service ကိုတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ပြည့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဝင်ချင်ဝင်ငြားသော်လည်း အဲဒီ ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးဟာ တကယ်ကိုပဲ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက် စိတ်ချယုံကြည်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စောစောကပြောတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအကြားမှာနေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ရုတ်တရက် အန္တရာယ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ အခု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အဓိက အမျိုးသားရန်သူ national enemy အဖြစ် ဘယ်သူကိုများ သူတို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ကျနော် မှတ်တမ်းတခု ဖတ်ရတာတော့။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အခုဟာက ဟိုအရင်တုန်းကလည်း ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ military doctrine ဆိုတာ ဖြစ်တည်းလုပ်ဘူးတယ်။ စစ်အခြေခံသဘောတရား။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်ဝါဒကနေ ဖြစ်လာတာ။ တချိန်မှာကတော့ ကျနော်တို့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တုန်းက အခြေအနေတွေ သုံးသပ်လိုက်ပြီးတော့ တဖတ်က dominion theory အရ ဟိုဘက်က ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီးက ကြီးထွားလာပြီးတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်လာတာဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံတွေက အစွန်းအဖြားမှာလည်း ဟိုဖြောက်ဖြောက် ဒီဖြောက်ဖြောက် ကွန်မြူနစ်တွေကလည်း ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတုန်းက အရှေ့ တောင်အာရှတခု ဖြစ်မလားဆိုပြီး။ ဟိုတုန်းကတော့ စစ်အေးတိုက်ပွဲနဲ့ ဖြစ်လာကြတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ စီတိုး တို့ နေတိုး တို့ ဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒီ ခေတ်ကာလတုန်းကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့  အဓိကအန္တရာယ်၊ ကျနော်တို့က ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ။ ဟိုဘက်ကတော့ one party communist နိုင်ငံ။ ပြီးတော့ international communism ကလည်း ရှိနေတယ်။ အဲဒီတုန်းက အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ - ဘယ်လိုနိုင်ငံ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ တွက်တာတော့ (ခင်များလည်း) အဲဒီလောက်ပြောရင် စဉ်းစားမိမှာပေါ့။ သို့သော် အခုလိုအခါမှာတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝါဒအရလည်း သိတဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဟာကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ် သင့်မြတ်အောင်၊ ကျနော်တို့ အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသစွာနေသွားမှာပါ။ အဲဒီတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ချစ်ချစ်ခင်ခင် လေးလေးစားစား နေသွားမယ်ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့  နိုင်ငံတွေဆက်ဆံရာမှာ ဖြစ်ရမယ့်သဘောတရား။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှ အေးချမ်းမယ်။ အခုတော့ ရန်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အရင်တုန်းက တွက်သလိုမျိုး ပြောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ မပြောနိုင်ဘူးလေ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တခုက လူတွေက စစ်ပွဲဆိုလို တိုင်းရင်းသားတွေကို ပစ်တာခတ်တာပဲ မြင်နေရတော့ အရပ်သားတွေကို စစ်ထဲဝင်ဆိုပြီး အဲဒီလို ပစ်ခိုင်းလို့ ဖြစ်ပါ့မလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ မကောင်းဘူး။ အဲဒါ မကောင်းဘူး။ အဲဒါအတွက် ရည်စူးပြီး လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကတော့ မကောင်းဘူးဗျ။ အမှန်ကတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့  sovereignty အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်မယ်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးကို ကာကွယ်မယ် စသဖြင့် အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ အဖိုးတန်တာပေါ့။ ကိုယ့်အချင်းချင်းတိုက်ဖို့ လူအားနည်းလို့ ပြည့်အောင်မြန်မြန်လုပ်တာ။ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ gazette ကိုထုတ်ပြီး ဥပဒေတည်တယ်။ နောက် လွှတ်တော်ခေါ်တဲ့အခါ ဒီဥပဒေကြီးကို ပြန်လည်ပြီးအတည်ပြုမယ်။ ဒါကတော့ ရတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူကအများစုကို။ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလည်း တယောက်တပေါက် ဆွေးနွေးတာပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဒီလွှတ်တော်က rubber stamp ကြီး။ ဒါက ဘယ်လိုမှ ရုန်းကန်လို့ ရတာမဟုတ်ဘဲ။ သို့သော် လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ပြောတယ်ဆိုတာက အမှန်က ကျနော်တို့လည်း ဗမာတွေနဲ့ ဗမာမျိုးချစ်စိတ်ရှိသလို၊ ရှမ်းကလည်း သူတို့ရှမ်းကလည်း သူတို့ sovereignty ရှိတာပဲ။ သူတို့လည်း အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံကြီး ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ဥပမာ မွန် - သူလည်း မွန်နိုင်ငံကြီး ရှိခဲ့တာပဲ။ ရခိုင်ဆိုလည်း သူ့နိုင်ငံရှိခဲ့တယ်။ ကရင်ဆိုလည်း သူ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နယ်တွေနဲ့ ရှိတယ်။ အလားတူ ချင်းလည်း သူတို့ sovereignty ရှိတော့ သူတို့လည်း မျိုးချစ်စိတ်ရှိတာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်ဆုံးတခု ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိစစ်တပ်ကို ဒီမိုကရေစီ စစ်တပ်တခုဖြစ်အောင် အသွင်ပြောင်းဖို့ဆိုရင် ဘာများလုပ်ဖို့ ထင်ပါသလဲ။ ဒီမိုကရေစီစံနစ်အောက်က တပ်မတော်တခုဖြစ်အောင်။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဖြစ်ပြီး၊ စံနစ်ကိုယ်က ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဖြစ်ဖို့လိုပြီး ဒီမိုကရေစီစံနစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအောက်မှာတော့ တပ်က အလိုအလျောက် တာဝန်ပေးတဲ့နည်းကျ ဖြစ်မှာပဲ။ တပ်ထဲမှာတော့ ဒီမိုကရေစီ မူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်ကုန်တခုကို တိုက်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီ တောင်ကုန်တိုက်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုက်သင့်တယ်၊ မတိုက်သင့်ဘူး၊ ဘာညာ အများစုက ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အနည်းစုဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီး သွားလုပ်လို့တော့ မရဘူး။ ဒါမျိုး သွားလုပ်လို့ရှိရင် တပ်ကအလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တပ်က တပ်အတိုင်းပဲ command အနေနဲ့ ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က တာဝန်ပေးပြီးလုပ်တာက ပြည်သူလူထု ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါက ပါလီမန် ဖြစ်တယ်။ ပါလီမန်က ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာ ဒီလူသည် ငါတို့ နိုင်ငံရဲ့  အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဒီ အန္တရာယ်နဲ့ ပတ်သက်တာကို တိုက်ဖျက်ရမည်လို့ ပါလီမန်က ဆုံးဖြတ်ရင် အဲဒီ ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာပါတဲ့ defense minister က အဲဒါကို carry out လုပ်ရင် စစ်တပ်က အဲဒီဟာအတိုင်းသွားရမယ့် သဘောဖြစ်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော indirect democracy တော့ ရှိလာလိမ့်မယ်။
Vacancy Announcement No. VA11/001, 12 January 2011
ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်စေ( ဇာနည်မောင် )
" ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်စေ "
ရင်နာလှတယ် လောကဓံရယ် --- ။
ခါးကမသန် " ဖြစ်နေလေရော့သလား
ပြိုင်တူအားစိုက်တွန်းလိုက်ရင်ရွေ့နိုင်တာပဲ --- ။
အန္တရာယ်ရှိတယ် ... သတိထား
ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်ကာခရီးသွား --- ။
ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်ကာတွေး --- ။
အပြစ်ပေးကြပါလေ --- ။
တော်လှန်တိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရဦးမယ် --- ။
သို့သော် --- ပျက်အစဉ်ပြင်ခဏပေမို့
ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်စေ --- ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော် အခုလွှတ် !!!!!!!!!!!!
သည်ချိန်ခါမှ စတင်လို့ .. .. ( ဖိုးသိကြား )
ပရကိုရှောင် သယ်ပိုးဆောင်ရွက် ..................
ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ရှေ့သို့ဆက်မည်... ...............
အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူများ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။။။
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ)
SPDC's Military Conscription Law
ကလေးမြို့ က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ယနေ့ မနက်က ဆန္ဒပြ
အောင်မြတ်စိုး | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၁ မိနစ်
ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကျောင်းကားခကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်လိုက်သဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၈၀၀ ခန့် ယနေ့မနက်တွင် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု ကလေးမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက လိုက်လျောမှု ပြုလိုက်သည်။
အာဏာရှင် သန်းရွှေ၏ အကြိတ်အနယ်ပွဲတပွဲ
မွန်ဇော်နိုင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၁
အာဏာရှင်ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့အာဏာအရပ်ရပ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားသူပါ။အာဏာအရပ်ရပ်ကို လက်ထဲ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်အောင် အာဏာရှင်ရဲ့ ဖန်တီးထားချက်က အာဏာရှင်စနစ်တဲ့ခင်ဗျ။ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာက အာဏာရှင်တက်လုပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ပေါ့ခင်ဗျာ။
အာဏာရှင်နဲ့အာဏာက တထပ်တည်း၊ တတွဲတည်းမို့ ခွဲလို့မရဘူး။ အာဏာရှင်ဟာ အာဏာမရှိဘဲ ရပ်တည်လို့မရဘူး။ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်ဟာ သွေးမစုတ်ရရင်သေရသလို အာဏာရှင်ဟာ အာဏာမရှိရင် သေရတာပါပဲဗျာ။
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အစစ်အမှန်ပါ။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကို ဖြုတ်ချ အပြတ်ရှင်းပြီး အာဏာရှင်မင်းဆက်ကို ဆက်ခံခဲ့သူပေါ့ခင်ဗျာ။
အာဏာရှင်ဆိုတာ အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရတယ်။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲရတယ်။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရတာက ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ အာဏာကိုတဦးတည်း မောင်ပိုင်စီးထားရတာကြောင့် ယှဉ်ပြိုင်သူကိုထားလို့မဖြစ်။ အမိန့်မနာခံသူဟူသမျှ ရန်သူချည့်မို့ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို အရက်စက်ဆုံး၊ အကြမ်းကြုတ်ဆုံး၊ မဆိုင်းမတွ ကျင့်သုံးရတာခင်ဗျ။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲရတာကလည်း ဒီလိုပါခင်ဗျာ။လက်ထဲမှာ အာဏာအရပ်ရပ်ကို ချုပ်ကိုင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့က အဓိကမဟုတ်ပါလား။ ဒါကြောင့် ရန်သူများကိုသာမက အတွင်းလူ တပည့်ရင်းလိုလို မွေးစားသားလိုလို ဟာမျိုးတွေကိုပါ လိုလျှင်လိုသလို ကောက်ကောက်ကျစ်ကျစ် အကွက်ချ လုပ်ကြံရတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ။ ပြည်သူများကိုလည်း စဉ်းစဉ်းလဲလဲ အကွက်ချ လိမ်ညာရတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ဖြုတ် ထုတ် သတ် လုပ်ကြံမှုများကိုကြည့်။
ဘုရင်ကိုသတ်နိုင်မှ ဘုရင်ဖြစ်နိုင်တာလိုပဲ အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်နိုင်မှ အာဏာရှင်ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကို ဖြုတ် ထုတ် ပစ်လိုက်တာ ဆန်းပါသလားဗျာ။
အာဏာပါဝါ သိပ်မကွာလှတဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ ထွန်းကြည်၊ ကျော်ဘ၊ မြင့်အောင် အစရှိတဲ့ တသီတတန်းကြီးသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ဖြုတ် ထုတ်ပစ်လိုက်တာကို မှတ်မိနေကြမှာပါ။
အတွင်းရေးမှူး (၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးနဲ့ ဗိုလ်စစ်မောင်တို့ကို လက်စ ဖျောက်ပစ်လိုက်တာကိုလည်း မှတ်မိနေကြမှာပါ။
တပ်တွင်း အကိုင်းအခက်များကို အတော်အတန် “သင်းသတ်” ပြီးတာနဲ့ ပင်စည်ကြီး King Maker တန်ခိုးအရှိန်အ၀ါရှိနေသေးတဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်း ဗိုလ်နေ၀င်းကို လွှတ်မထားတော့ဘဲ လက်ဦးမှုယူဖမ်းဆီး အကျယ်ချုပ်ချခဲ့တာကိုလည်း မေ့မရနိုင်ကြသေးပါခင်ဗျာ။
ဆရာကိုရှင်းအပြီး ဆရာ့တပည့်လက်ရင်း ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုလည်း မယုံကြည်နိုင် စိတ်မချနိုင်တော့လို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့ သူ့ရဲ့နံမည်ကျော် စစ်ထောက်လှမ်းရေးတဖွဲ့လုံးကို ဗိုလ်ချုပ်ကအစ အကြပ်တပ်သားအဆုံး တပြုံးလိုကို မြေလှန် ဖျက်သိမ်း၊ ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချပစ်လိုက်တာကိုလည်း မျက်ဝါးထင်နေတုန်းပဲလေ။
ယခုနောက်ဆုံး ငှက်ပျောပင်အလား တဖတ်ပြီးတဖတ် အခွာခံနေရသူတို့ကား လက်ရင်း တပည့်ကျော်တွေချည်း ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသုံးဦး။ ရွှေမန်း၊ သိန်းစိန်၊ တင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အားလုံးလိုလိုပါကလား။
အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအတွက် ရန်းဆူးရန်ငြှောင့်အားလုံးကို သစ္စာရှိစွာအမိန့်နာခံပြီး မသက်မညှာ ရက်စက်စွာ ရှင်းပစ်ပေးခဲ့ငြားလည်း သူတို့ခမျာတွေကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်စက်ကွင်းက မလွတ်ကင်းနိုင်ဘဲ အစတေးခံသွားကြရတာပါနော်။ သူတို့အဖြစ်က ငါးကြင်းဆီနဲ့ငကြင်း အကြော်ခံရတာမျိုးလို့ ဆိုရမှာပါ့။
အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ အပြင်စည်းဝိုင်းက ရန်သူများကို ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် ဖိနှိပ်၊ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ ထောင်ချထားတာတွေကိုပါ စာဖွဲ့တင်ပြရရင် ဆုံးနိုင်ဘွယ်ပင်မရှိ။ တစိတ်တပိုင်းကိုပဲ ပမာပြရသော် ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ။ ၂၀၀၇-ခုနှစ်ရဟန်းသံဃာများကို မောင်းပြန်သေနတ်နဲ့ သတ်တဲ့ပွဲ။နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ ကျော်ကို ယနေ့တိုင် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာတွေဗျ။
အဲဒီ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တာတွေအပြင် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ လိမ်ညာတာတွေကလည်း မနည်းပါခင်ဗျာ။ အနှစ် ၂၀ ကျော် စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်နေရာမှာ ခေါင်းပေါင်း၊ တိုက်ပုံ၊ပုဆိုးအရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အစားထိုးဖို့ မျက်လှည့်ပြနေတာ။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးတော့မယောင်ယောင် တကမ္ဘာလုံးကို သူငယ်နှပ်စားလုပ်နေတာ။ တကယ်တော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာနဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် လုပ်ကြံပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်ဗျာ။
ယခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဘ၀မှ သမ္မတကြီး ဦးသန်းရွှေဘ၀သို့ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ဘ၀ကူးပြောင်းဖို့ရန်သာ ရှိပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့် ဘ၀ကူးကောင်းရေးအတွက် ကြိုတင်မဲဖြင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ၃ ဦးနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများရဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ထောက်ခံမှုကို ရရှိဖို့လိုလာပြန်တယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ တစ်ပါးသူတို့ရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မှီခိုရတဲ့ဘ၀ကို ရောက်သွားရပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင်သန်းရွှေကို တဖန်ပြန်ပြီး ဖြုတ်ချနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို စစ်ဘောင်းဘီချွတ် ပုဆိုးဝတ်ဗိုလ်ချုပ်ပြုတ်များက ပထမဦးဆုံးရရှိသွားပါပြီ။
ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင်သန်းရွှေက သူ့အာဏာကို ယှဉ်ပြိုင်ခြိမ်းခြောက်လာမယ့်သူတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်ပါ့မလား။ အပြတ်ရှင်းရတော့မယ့် အခြေဆိုက်လာပြီလေ။
ယူနီဖေါင်းအချွတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စစ်ဗိုလ်ပြုတ်တို့ကလည်း ဖြေမဆယ်နိုင်တဲ့ မကျေမနပ်စိတ်ကြောင့် သန်းရွှေကြီးကို သမ္မတဖြစ်လာဖို့ရာ မဲပေးရွေးချယ်ပါတော့မလား။ဒီအချက်ကို သန်းရွှေကြီး စိတ်ချနိုင်မယ်မထင်။ ဒီအခြေအနေမှာ အာဏာရှင်သန်းရွှေကြီး အလေးအနက်သိထားဖို့က ဗိုလ်ချုပ်မုးကြီးက သူ့လက်အောက်အရာရှိ ဗိုလ်ချုပ်များကို ဖြုတ် ထုတ် ရှင်း လုပ်ပစ်သကဲ့သို့ ဗိုလ်သန်းရွှေ “ထွင်” လိုက်တဲ့ ကြိုတင်မဲဖြင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် စာရင်းဝင်လာသူ ဗိုလ်ပြုတ်များကိုမူ ဖြုတ် ထုတ် ရှင်း လုပ်ပစ်ဖို့ရာ မလွယ်ကူတော့ပါ။
ကြံလိုက်စမ်း စစ်အာဏာရှင်ကြီး။ရက်ရက်စက်စက် ဖြုတ် ထုတ် သတ် နေပြည်တော် နန်းတွင်းလုပ်ကြံမှုကြီး။
ဗိုလ်ချုပ်ပြုတ်များကရော စစ်တပ်အာဏာရော သမ္မတအာဏာပါ သိမ်းပိုက်ရရှိသွားမယ့် အာဏာရှင်သန်းရွှေရဲ့ လက်အောက်မှာ မိမိတို့ရဲ့အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် လုံခြုံမှုရှိပါ့မလားလို့ မတွေးတော မစဉ်းစား မကြံဆဘဲ နေပါ့မလား။
နောင်တော့် နောင်တော်တို့ အစဉ်အဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကံကြမ္မာကိုလည်း မျက်စေ့အောက်မှာပင် တွေ့ဖူး မြင်ဖူးခဲ့ပြီးပြီ။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း“နောက်ကျော ဓားထိုး” တဲ့ သန်းရွှေကြီးရဲ့ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက် ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲမှုကို ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒီတော့ ကြိတ်မှိတ်ပြီး ငြိမ်ခံသွားကြဦးမလား။
ဘာတွေ ဖြစ်လာကြမှာလဲ။ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော် နန်းတွင်းမှာ ဓါးကို အပြိုင်သွေးနေကြပြီလား။
အခုတော့ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ ၃၁ ရက်နေ့မှာတော့ ကြေညာထားပါပြီ။
အာဏာနှင့် “ခွာ” မရဖြစ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် သန်းရွှေကတော့ ဘ၀ပေးအရအာဏာကို မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ အတင်းအဓမ္မရယူမှာ အသေအချာဖြစ်တာမို့ သတိလက်လွတ် မနေမိကြဖို့ရာ မွန်ဇော်နိုင်က“ဗျို့” ဟစ်လိုက်ရပါတယ်။
“အားလုံးသတိဗျို့ ..သတိ ..သတိ ..သတိ” ။ ။
နံပါတ် ၀မ်း Brain Wash သင်တန်း ၂၀၁၀
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/12/20112အကြံပြုခြင်း